Ambongadiny PCB boribory matevina ambongadiny | CAMTECH PCB
Mailaka: info@camtechcircuits.com telefaona: +86 13713989501 Miresaka izahay: +86 13713989501
Frequency matetika Pcb
Pcb varahina matevina
an-trano > Products > Pcb varahina matevina
Ny PCB varahina matevina dia miavaka amin'ny rafitra misy hatevin'ny varahina hatramin'ny 105 ka hatramin'ny 400 µm. Ireo PCB ireo dia ampiasaina amin'ny famoahana lehibe (avo) ankehitriny sy ny fanatsarana ny fitantanana hafanana. Ny varahina matevina dia mamela ny fizarana lehibe amin'ny PCB ho an'ny enta-mavesatra avo lenta ary mamporisika ny fanaparitahana ny hafanana. Ny endriny mahazatra indrindra dia multilayer na lafiny roa. Miaraka amin'ity haitao PCB ity dia azo atao ihany koa ny manambatra firafitra milamina amin'ny sosona ivelany sy ny varahina matevina ao anaty sosona anatiny. Tombony amin'ny PCB Copper matevina:
PCB varahina matevina dia be mpampiasa amin'ny fitaovana isan-karazany ao an-trano, vokatra teknolojia avo lenta, fitaovam-piadiana, fitaovana elektronika ary fitaovana elektronika hafa. Ny fampiharana PCB varahina matevina dia mahatonga ny singa fototra amin'ny vokatra elektronika vokatra-circuit boards manana fiainana serivisy lava kokoa, ary miaraka amin'izay dia manampy be amin'ny fihenan'ny haben'ny fitaovana elektronika izy io.
Kitapo boribory plate varahina pcb matevina
Fitsaboana ambonin'ny tany: Leard maimaim-poana HAL 12 sosona Hatevin'ny birao: 2.1mm Min Hole Size: 0.3mm Min ny sakany / habaka: 0.2 / 0.2mm Fandraisana manokana: lavaka plugina resina, fitrandrahana fifehezana lalina Fampiharana: famatsiana herinaratra
Layer: 4 Sakany / Space: 0.1 / 0.1mm Fitsaboana ambonin'ny tany: ENIG Teknolojia manokana: fanaraha-maso Impedance